ပန်ဒိုရာ: ပိုပို မိုမို ဂိုဂို - အပိုင်း ၃
ဒိန်းဒေါင်ဆိုတာ လူရွှင်တော်တော့မဖြစ်လောက်ဘူး ခု အဲ့တာကို ထော်လာဂျီလို့ ခေါ်တယ်ထင်တယ် ။
သူတို့ကို အဲလို ဝင်တိုက်တယ်...
အစုလိုက် အပုံလိုက် တကောင်အပေါ် တကောင် ထပ်ပြီးအိပ်နေတဲ့ ဘဲပေါက်လေးတွေကို မြင်ယောင်ပြီး ကြည်နူးနေရုံရှိသေး...း((
ရေးထားတာ ချစ်စရာ ကောင်းတယ် အစ်မရေ။
တကယ်က သူတို့ရဲ့ ချစ်စရာနေထိုင်ပုံလေးတွေကို အများကြီးဖတ်ချင်သေးတာ...
ဖတ်လို့ ကြည်နူးတုန်းလေး ရှိသေးတယ်။
မြန်မာကား ထုံးစံ ဇာတ်နာတာ ပါလာတော့မယ်။
မြန်မာကားတွေ အဲ့ဒါတွေ မုန်းလွန်းလို့ပါဆို....
ပန်ပန်ကို မုန်းလိုက်တော့မယ်။ :P
စောင့်ဖတ်နေပါတယ် မပန်ရေ။း) စိတ်မကောင်းစရာတွေ နောက်အပိုင်းတွေမှာ ပါမှာ စိုးနေတယ်။
Ko Boyz ကို ထောက်ခံပါ၏။
တော်ပြီ... အမက ငိုချင်ရက် လက်တို့နေတယ်။
ပြန်တော့မယ်... ခေါင်းငိုက်စိုက် ချလျှက်...
တော်ကြာ ဒုန်းဒိုင်း အတိုက်ခံ ရမှာစိုးလို့..... :P
ဘဲငန်းလေးတစ်ကောင်က စအိပ်ပျော်သွားတယ်။ နောက်တစ်ကောင်က သူ့အပေါ်ကို တက်မှီပြီး အိပ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ တစ်ကောင်ပြီး တစ်ကောက် အချင်းချင်း လာမှီ ပုံထပ်ပြီး အိပ်လိုက်ကြတာ မိုးလင်းလို့ သူတို့ခြံထဲကို သွားချောင်းကြည့်လိုက်ရင် ဘဲငန်းပေါက်စလေးတွေ အပုံလိုက်ဖြစ်ပြီး အိပ်ပျော်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းကာလများဆို ချမ်းလို့ အဲဒီအပုံလေးက တုန်တုန်ယင်ယင် ဖြစ်နေတတ်သေးတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အောက်ဆုံးမှာ အိပ်ပျော်နေတဲ့ ဘဲပေါက်ကလေးကများ အရင်နိုးပြီး မတ်တပ်ရပ်လိုက်လို့ရင် အမွှေးလေးတွေ အိနေတဲ့ ဘဲအပုံကလေး ပြိုကျသွားပြီး အပေါ်က ဘဲငန်းလေးတွေ အိပ်ချင်မူးတူး လန့်နိုးလာကြတာ သိပ်ရယ်စရာကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်းပါ။
ဒီအပိုဒ်လေးဖတ်ရတာ ရီလိုက်ရတာ..မမက ပေါ်လွင်အောင်ရေးတတ်လိုက်တာ...သူတို့လေးတွေကလဲ ကြောင်ပေါက်စလေးတွေလိုပဲနော်...
ပန်ပန်ရဲ့ ဒီဘဲဇာတ်လမ်းဖတ်မှ ဘဲငန်းတွေကို ချစ်ချင်သလိုလိုဖြစ်လာတာ...
ငယ်ငယ်က သိပ်မုန်းခဲ့ဒယ်.. သူတို့ကို...
လမ်းထဲက အိမ်တစ်အိမ်က ခြံလုံအောင် ဘဲငန်းတစ်အုပ်မွေးထားတာ.. လမ်းသွားလမ်းလာတိုင်းကို လိုက်လိုက် လိမ်တာ....။ အုပ်စုဖွဲ့ပြီး ကလေးတွေကို အနိုင်ကျင့်တဲ့သဘောပေါ့။ စက်ဘီးနဲ့ ဖြတ်သွားရင်တောင် နောက်က မမီမကမ်းပြေးလိုက် ရန်လုပ်သေးတာ..။ အဲ့အိမ်ရှေ့က ဖြတ်ကာနီး ဘဲငန်းအုပ်ကို အရိပ်အခြည်ကြည့်ရသေးတာ အရင်...။
ဘဲငန်းလေးတွေ အိပ်တာ ချမ်းလို့ တုန်တာ ဖတ်ရင်း ချစ်နေတာ..။
အော်..ငါ့ဘ၀ ငါ့ဘ၀၊ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုဟာ တာရှည် မခံပါလားးးး
(ဘ၀ကြီးနဲ့ ချီပြီး စိတ်နာသွားဒယ်)
try to write and post it quick for another episode please. i can't wait anymore.
ဟောဗျာ အကောင်းခန်းရောက်မှ ဆက်ရန်တဲ့ မပန်တော့လုပ်ချပြန်ပြီ ဆန့်တငန့်ငန့်နဲ့ အပိုင်းလေး မြန်မြန်တင်ပါဗျို့...။
ဒိန်းဒေါင်ဟုတ်ဘူးလေ.. ဒိန်းဒေါင်းပါ .. တချို့နေရတွေမှာ ဂွန်ဒေါင်းလို့ လဲ ခေါ်ကြပါ၏... ဆက်ဖတ်ချင်လှပီဗျိုး.... အိမ်မှာ တော့ငယ်ငယ်က ကြက်တစ်အုပ်ပဲမွေးဘူးပါ၏.. ခံစားလို့တော့ရပါတယ်... မြန်မြန်တင်နိုင်ပါစေနော်။
အဟီး... ဆောရီး ကော်မန့်လာပေးတာ နာမည်မှားရိုက်မိတယ် မသက်ဝေကိုသွားသတိရလိုက်မိလို့ထင်ပါ့..။
ဖတ်ခဲ့တယ် ... ဘဲအင်ပိုင်ယာ ကို မြင်ခဲ့ပါတယ် ...